mubvunzo Airplane kurumbidza
1 gore 11 ago - 1 gore 11 ago #292 by JanneAir15
Mhoro! Ndine mubvunzo zvakare. Ndinoda ane Airbus A380 asi kune vakawanda vavo (payware uye freeware). Ndinoda kuziva kuti ndeupi ndinofanira kuwana. Hazvina basa zviri payware kana freeware chero zvakanaka.
Uye kana nemiwo matambudziko uchisarudza ndege zvakanaka zvino tuma mubvunzo wako pano!
Ndakatoiverenga akawana umwe riri papeji ino. Asi ndichine mubvunzo mumwe pamusoro ndege. Unogona kuwedzera tsika liveries pazviri?
Last edit: 1 gore 11 mwedzi yapfuura JanneAir15.
1 gore 11 ago #293 by Dariussssss
Ndiri zvakare kushandisa mumwe, uye hazvisi zvachose. Ndaiedza kuisa mamwe liveries, asi vamwe chikonzero, zvakanga zvisiri kushanda ... pamwe ndakanga zvakaipa panguva chinhu.
1 gore 11 ago #330 by Gh0stRider203
Dariussssss akanyora: Ndiri zvakare kushandisa mumwe, uye hazvisi zvachose. Ndaiedza kuisa mamwe liveries, asi vamwe chikonzero, zvakanga zvisiri kushanda ... pamwe ndakanga zvakaipa panguva chinhu.
hauna yokugadziridza aircraft.cfg faira uyewo?
1 gore 11 ago #332 by Dariussssss
Ndakaita, asi zvakadaro, iye ndakagadza livery haana kuratidza kukwira ... handizivi nei.
1 gore 11 ago #334 by JanneAir15
Ndinofunga ndinoziva nei. Ndege ndiyo pakutanga nokuda FS9. Ko iwe kuwana zvakanaka livery nokuda ndege? Ndakatarisa Project Airbus peji uye pane A380 nokuda FS9 (ndege chakafanana papeji ino asi zviri zvakachinjwa kuti FSX) saka handisi chokwadi chii here kuita kuti tiwane liveries kushanda zvakanaka. Ndichaedza kuita chinhu kuwana liveries vanoshanda uye ipapo udza pano.
1 gore 11 ago #338 by Dariussssss
Achitarira mberi nayo. Same pano, achaedzazve.
1 gore 11 ago #339 by Dariussssss
Saka, ikoko une naro. Ndakakwanisa hwokugadza livery kupinda '' yedu '' A380 uye hunoshanda.
Nzira kuita ichi ... Chokutanga, tsvakai uye kukopa chete A380 unaku uchida kuisa. Unogona kuwana yakawanda navo Avsim. Isa unaku forodha kupinda PA A380 forodha, akazaruka uye Edit ndege .cfg faira. Iva nechokwadi kuti aone kuti unaku inowirirana sim wenyu pane izvi, iye FSX.
1 gore 11 ago #342 by JanneAir15
Ok, akavonga Ndichaenda kuedza kuti.
1 gore 11 ago #343 by Gh0stRider203
JanneAir15 akanyora: Ndinofunga ndinoziva nei. Ndege ndiyo pakutanga nokuda FS9. Ko iwe kuwana zvakanaka livery nokuda ndege? Ndakatarisa Project Airbus peji uye pane A380 nokuda FS9 (ndege chakafanana papeji ino asi zviri zvakachinjwa kuti FSX) saka handisi chokwadi chii here kuita kuti tiwane liveries kushanda zvakanaka. Ndichaedza kuita chinhu kuwana liveries vanoshanda uye ipapo udza pano.
hove dzakanaka! Handina kufunga kuti elnaz
Time chokusika peji: 0.457 mumasekonzi